Xildhibaan Mahad Salaad oo sheegay amar lagu raali gelinayo Itoobiya in lagu xiray Iskuulkii 15 May ee dowlada Masar maamuleysay – Kalfadhi
Xildhibaan Mahad Salaad oo kamid ah Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa sheegay in amarka lagu xirayo Iskuulkan uu yahay mid lagu raalli gelinayo dowladda Itoobiya.
Mudane Mahad, ayaa ka hadlay go’aanka dowladda Soomaaliya kula wareegeyso Iskuulka 15 May ee ku yaalla degmada Warta Nabadda (Ex Wardhiigley), waxaana Iskuulkan maamula Guddiga waxbarashada iyo Tacliinta dalka Masar.
“Amar lagu raali gelinayo Itoobiya oo lagu xiray Iskuulkii 15 May ee dowlada Masar maamuleysay, ardayda dhigatana lacag la’aan wax lagu bari jiray! Horay hadii Qalbi Dhagax loogu dhiibay. Dekadihii dalka lagu wareejiyay. Qaraarkii Jaamacada Carabta ee dowlada Soomaaliya horay u taageertay amarkooda looga laabtay.”ayuu yiri Xildhibaan Mahad Salaad.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Dugsigan 15 May ka dhigi doonto Machadka Tababarka Macallimiinta Gabdhaha Soomaaliyeed, si sare loogu qaado tayada waxbarashada dalka.
Dowlada Soomaaliya ayaa dhawaan sheegtay in ay dhex-dhexaad ka tahay khilaadka wabiga NIIL ee u dhexeeya Masar, Itoobiya iyo Sudan, lama ogga in arritan ay salka ku heyso khilaafkaasi.